सुष्मासँग शोभितलाई देखेर पूजा जल्छिन् त ? « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
सुष्मासँग शोभितलाई देखेर पूजा जल्छिन् त ?
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो अभिनय कौशलताका कारण भन्दा पनि अन्य कारणले विवादमा आइरहने नाम हो, सुष्मा कार्की । कहिले प्रेमका कारण, कहिले कलाकारसँगको तित्तताका कारण त कहिले आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण उनी विवादमा आइरहिन्छन् ।
पछिल्लो समय अभिनेत्री पूजा शर्मासँगको उनको तित्तताले त गम्भिर मोड नै लिएको हो । मिडियामा दुवैले एकअर्काविरुद्ध खुलेरै खनिन थालेका थिए । एक समय थियो जतिबेला सुदर्शन र सुष्मा निकै नजिक थिए । उनीहरुको सम्बन्धले फिल्म वृत्तमा प्रेमकै नामले समेत चर्चा पाएको थियो ।
तर पछि यिनै सुदर्शन पूजासँग नजिकिएसँगै सुष्मा र पूजाविच खासै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको विश्लेषण फिल्मवृत्तमा हुने गर्छ । फिल्म क्षेत्रमा यि दुइका विविध घटना र एकअर्कालाई इंगित गर्दै दिएका अभिव्यक्ति केलाउँदा पनि त्यस्तै देखिन्छ ।
यो त भयो सुष्माको पूरानो विवाद । तर, आज हामी गर्दैछौ हालै एक कार्यक्रममा सुष्माले देखाएको ‘अनप्रोफेसनल’ अर्थात् अव्यवसायिक व्यवहारको । कलाकारलाई समाजमा ‘रोल मोडल’का रुपमा समेत लिइने गरिन्छ । उनीहरुको खानपिन, रहनसहनदेखि अभिव्यक्तिसम्म सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा उनीहरुले देखाउने हरेक व्यवहारले ठूलो अर्थ राखिरहेको हुन्छ ।
प्रसंग हो, गायिका गंगादेवी महर्जनको ‘न आशा भो तिम्रो’ बोलको गीत रिलिज कार्यक्रमको । मंगलबार काठमाडौंको स्वयम्भुस्थित स्वयम्बु बैंकुटमा आयोजित कार्यक्रमकी प्रमुख आर्कषणमध्ये एक थिइन्, सुष्मा । कारण, उनी अभिनित म्यूजिक भिडियो रिलिज भइरहेको थियो ।
गीतकी गायिका, मोडल, संगीतकारलगायत केही व्यक्तिलाई ड्यासमा बोलाइएको थियो, अतिथिका रुपमा । जसमा सुष्मा पनि परेकी थिइन् । तर, ड्यासमा हेर्दा सुष्माको ध्यान गीत लन्चतिर थिएन, कहिले मोबाइलमा थियो त कहिले कहाँ !
यतिसम्म त ठिकै थियो तर सुष्माको अनप्रोफेसनल व्यवहार त्यतिबेला झल्कियो जब कार्यक्रम सुरु भएको केही मिनेटमै उनी स्टेजबाट ओर्लिइन् र दर्शक दिर्घामा आएर केही मिडियाकर्मीसँग कानेखुशी गर्न थालिन् । ‘मलाई अचेल मिडियामा आउन मन लाग्दैन’ भन्दै कानेखुशी गरिरहँदा हाम्रोकलाकर्मी पनि त्यही छेउमा बसिरहेका थिए । माथि स्टेजबाट मन्तब्यका लागि नाम आउँदासमेत उनी नसुनेझै गरि बसिरहेकी थिइन् । यतिसम्म कि पछि खाँदा लगाउने बेलामा समेत गीतका भिडियो निर्देशकले उनलाई हात समातेर लानुप¥यो ।
उनको यस्तो व्यवहार देखेर वरिपरि ‘के भाकी यो सुष्मा’ भन्दै गाईंगुईं समेत चलेको थियो । उनको यो घमण्डीपन कति ठिक थियो त्यो त उनले पक्कै आत्मसमीक्षा गर्लिन् । तर, यो दृश्य वरिपरिका लाई भने पचिरहेको थिएन ।
सुष्मा पुगेको स्थानमा कँही न कँही पूजा शर्माको नाम त नजोडिएको हुन्न । यो कार्यक्रममा पनि जोडियो नै । त्यो पनि सुष्माकै मुखबाट । जब पूजाले ढिला गरि आइुगेका फिल्म निर्देशक शोभित बस्नेतसँग फोटो खिचाइन्, त्यसपछि हाम्रा फोटोग्राफरसँग सुष्माले व्यंग्य गर्न भ्याइहालिन्, ‘अब यो फोटो पूजालाई देखाउने होला !’ उनको आशय थियो, शोभितसँगको फोटो देखेर पूजा जल्छिन् । हो कि होइन, त्यो त भगवानै जानुन् !